Oge maka nnukwu mgbanwe na nnukwu ntụgharị: bịanyere aka na arịrịọ: Martin Vrijland
Oge maka nnukwu mgbanwe na nnukwu ntụgharị: bịanyere aka na arịrịọ ahụ
gbara akwụkwọ OZI OZI	by Martin Vrijland	na 12 Ka 2020	• 22 Comments
isi iyi: thisfitsme.com
Nsogbu nke Corona na-amanye anyị iche echiche banyere mgbanwe dị ukwuu. Ekwuputala m ya mgbe websaịtị m nọ n'okpuru mwakpo DDoS maka ọkara ụbọchị. Emere m nkwupụta na-enweghị atụ, na-ekwupụta: "Atụmatụ m bụ iwepụta atụmatụ pụtara n'ihu n'oge na-adịghị anya imebi na ịkwatu gọọmentị na usoro a dum."
Arụrụ m ọrụ na atụmatụ ahụ ogologo oge ma wepụtara ya ọtụtụ ndị gosipụtara ihe nkiri. Ọ bụ atumatu bụ nke ga-emetụta ọchịchị onye kwuo uche ya kpọmkwem, site na sistemụ ntuli aka n'ịntanetị nke echekwabara site na teknụzụ blockchain.
Ee, enwere ihe egwu dị na teknụzụ, mana ihe kachasị njọ dị na pyramid ike. Ekwesịrị ka etinye ya n'usoro ahụ ma tụgharịa. Nke a ga - ekwe omume naanị ma ọ bụrụ na o jiri amamihe mee ya. Ike ekwesighi gaa n'isi ihe, mana ike ghaara ndi mmadu.
Anyị ga-eme ya n'ụzọ dị iche!
Kpamkpam iche! Ma enyemaka gị dị mkpa. Ajụjụ ole na ole bu ụzọ:
Want chọrọ ka gị na ụmụ gị biri n'ụlọ mkpọrọ dijitalụ?
Wantchoro ka ogwu gi ma o bu umuaka gi n’azu don't maghi ihe o nwere karia ihe “ndi okacha” gwara gi?
You chọrọ ka etinye gị na sistemụ gọọmentị steeti nke eji nyochaa ihe niile site na Nnukwu data?
Mba? Ugbu a bụ oge iwepu sistemụ ahụ dịka anyị siri mara ya! Oge maka mba nke nweere onwe ya nke nwere ọchịchị onye kwuo uche ya: ụzọ ọhụụ ebikọ ọnụ. Oge iwepu ulo akwukwo nwa nkita na okpueze.
Ndi ochichi onye kwuo uche ya ugha
Usoro ochie a sitere na ochichi onye kwuo uche ya ụgha, ebe o yiri ka ụmụ nkịta ọ bụla na ndị ndọrọndọrọ ndọrọndọrọ ọzụzụ ka ha jeere naanị okpueze ma nye ndị mmadụ echiche ziri ezi.
Ha na-enye nhọrọ dabara na otu ahụ maka echiche niile na uto ọ bụla n'obodo na arụmụka site na mgbagha pụtara ihe iji chebe otu ike na atụmatụ dị n'azụ ihe nkiri.
Mmegide, n'aka ekpe, aka nri, onye na-emesapụ aka, ha niile na-a alleụ iyi ịkwado okpueze na mkparịta ụka kpụ ọkụ n'ọnụ na mgbasa ozi, mkparịta ụka n'oge ntuli aka; ha no ebe a ime ka ndi mmadu kwere na a nuru olu ha.
Ulo ochichi onye kwuo uche anyi dika anyi mara ya n’ime ndu anyi niile. Anyị na-ebi na mkpokọta hypnosis, mkpokọta ìsì.
Kwere na enwere ike ịme ya n'ụzọ dị iche
N'ihi na anyị na-ebi na sistemụ mmebi site na nwata, anyị amabaghị karịa. Ọ bụ ọnọdụ anyị ka anyị rapara n'ahụ.
“Anyị chọrọ gọọmenti ma ọchịchị onye kwuo uche ya bụ ụdị kachasị mma. Ka a haziri ahazi karị, otú ahụ ka nkwekọrịta na-abawanye uru ma nke a bara uru ”, anyị na-eche.
"Mgbe ahụ onye ọ bụla na-eji otu asphalt, anyị nwere ezigbo ụgbọ njem ọha, ụtụ na-ahazi nke ọma, anyị na-enwetakwa ọfụma n'akụkụ niile nke ndụ anyị."
Maka ụfọdụ, eze ukwu na-eyiri uwe n'ezie
Peoplefọdụ ndị mmadụ ahụghị n'ezie na eze ukwu ahụ eyighị uwe. Ha kwenyesiri ike na sistemu ahụ dịka anyị siri mara ya, ọtụtụ bụ ndị ndabere ma hụ ya n'anya.
Ọ bụ naanị n'oge nsogbu nke corona ka ụfọdụ malitere ịhụ na a na-eji nwayọ nwayọ na-adọrọ anyị gaa sistemụ komunizim ọchịchị ụwa. Ndị ọzọ ga-ahụ nke a dịka ọganihu dị mkpa; ọganihu nke enwere ike ịkwagide iji gbochie ọrịa na-efe efe n'ọdịnihu ma chekwaa gburugburu.
Mana nke ahụ chọrọ ka e debe ọnụ ọgụgụ mmadụ na weebụ njikwa teknụzụ ka ọ bụ nsogbu ọtụtụ ụwa na-esite n'aka ndị ọgaranya nwere agụụ na-enweta ego na-enweta ego site na ọgwụ, mmanụ, mmepụta na ihe ndị ọzọ?
Okpueze, ulo eze anyi
Royallọ ndị eze anyị arụwo ọrụ dị mma na nke a. Ha ji ikike ha na isi obodo ha tumadi na mmịpụta nke ngwaọrụ na mmanụ. Yabụ na anyị anaghị ekwu maka ihe ndị dị njọ n'oge gara aga.
Ole ndị ka ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-a swearụ iyi? Na 'okpueze'. Ha na-a swearụ iyi ịkwado ebe a na-egbochi ike nke na-abịanye aka na iwu niile yana onye ikpe, ndị isi, ndị ọka iwu na ndị uwe ojii na-a swearụ iyi. Ha adighi-a swearu iyi ikwere na ndi mmadu, kama obu okpueze.
Okpueze ahụ na-achịkwa site 'n'amara nke Chineke'. Onweghi onye puru igosi amara nke Chineke ya na ike bu imi.
Ọ bụ usoro nkwenye nke onye ọ bụla nọ na ọha nwere ọnọdụ, n'ihi na ndị nne na nna na nne na nna, ndị ezinụlọ na ndị enyi: Ha niile nwere otu ụdị ụgha a, yabụ na ọdịghị mma.
Ntụgharị ntụkwasị obi
Anyị nwere ike ịga n'ihu na-atụkwasị obi na sistemụ na-agbasokarị, nke na-agbakwụnye centraili ma anyị nwere ike ịtụkwasị obi na ọ bụrụ na anyị eburu onwe anyị, anyị nwekwara ike ịhazi ihe nke ọma. Anyị enweghị ike tufuo akụrụngwa teknụzụ niile anyị ji rụọ ọrụ n'otu oge, anyị enweghị ike niile bi na mberede na-enweghị akụrụngwa na nhazi. Anyị nwere ike, dozigharị usoro ọchịchị ya na mkpebi mkpebi.
Ọchịchị ga-enwe ezigbo ndị nnọchi anya nke ndị na-a notụ iyi na-enweghị ntụkwasị obi n'ocheeze, kama na mmadụ. Ndi mmadu gha aghaghi ikwu ihe di ya. I kwenyere na nke a agaghị ekwe omume, maka na ọtụtụ mmadụ nwere obere ihe banyere ọtụtụ ihe dị iche iche. Nke ahụ bụ ezigbo arụmụka, mana enwere ike ọ dị ọtụtụ ihe ọ dị mkpa ka ọ dị mfe.
Ọ bụrụ na ndị ahụ achọghị mmụba n'ọtụtụ, yabụ na a gaghị enwe mmụba n'ọtụtụ. Ọ bụrụ na ndị mmadụ na-eche na mgbasa ozi na-amalite n’ihu dị ka mkpọsa, mgbe ahụ, a ga-agbanyerịrị. Ọ bụrụ na ndị ahụ achọghị nyocha, a gaghị enwe nnyocha. Ya mere, na ndị ọzọ.
Ntughari nke uzo ikike
Ma ihe niile na-amalite site na iweghachi ike nke ike. Ha ga na-agakwuru ndị mmadụ kama ịga okpueze. Ha aghaghi igba mmadu aka; mmadu. Ndi mmadu a hoputara ndi ochichi nke oma site na ntuli aka ndi mmadu hoputara ma ghaara ndi mmadu nkwa. Ọzọkwa ndị ikpe niile, ndị ọrụ obodo, ndị uwe ojii, ndị agha, ndị ọka iwu, wdg. Niile ga-a swearụrị iyi na ndị mmadụ na ihe niile nwere ike kwatuo.
Direct onye kwuo uche ya
Enwere ike iji teknụzụ jupụta ọchịchị onye kwuo uche ya. Nkà na ụzụ Blockchain nwere ike ịgba mbọ hụ na ị nwere ike ikwe ka olu ndị mmadụ kwuo okwu na enweghị ike. Nke ahụ ọ́ bụghị obere echiche? Enwere nkwado maka nke a? You nụ na Elon Musk kwadoro ya, ọ bụ na ị na-akpọchi ntị gị na mberede?
Itu votu si 'igwe ojii'
Onye obula nke choro itu vootu ya nwere ike iso na-eme mkpebi banyere nnabata iwu na iwu, ha nwere ubochi. A na-eme ntuli aka site na kọmpụta gị ma ọ bụ na ekwentị jikọtara ya na ụdị njirimara. Nke mbu, anyị kwesịrị ịtụleghachi iwu niile dị ugbu a: 'nwere ike nọrọ' ma ọ bụ 'ga-aga'. Ee, ime ka ọ dị mfe na ime ka ihe dị mfe karịa na ngwa ngwa taa.
Pro na con si
Nke a pụtakwara na anyị ga-etinye nnukwu mkparịta ụka na sistem. E kwuwerị, anyị kwesịrị ịchọ iwepu ike nke ndị mmadụ dịka Bill Gates. Otu ike mgbanwe a nwekwara ike ime ebe ahụ.
Ihe con dị mfe ịdepụta. Anyị kwesịrị n'ezie belata teknụzụ na nnukwu data na ọ bụ otu a ka anyị nwere ike isi nye nri.
Bụ Elon Musk abụghị onye chọrọ ịnwụrụ ụbụrụ anyị na igwe ojii wee jikọọ ya na AI. Gateszọ ọnụ ụzọ Bill etinyeghị maka paten 2020-060606 iji mee ka ụbụrụ anyị bụrụ ihe mgbochi na blockchain? Eeh, mana anyị nwere ike ịtụ vootu nke ahụ. Anyị nwere ike belata teknụzụ anyị wee chọọ ndị mmepe AI ka ha ghara inye AI n'efu.
O nwere ike isiri ọtụtụ ike itinye iwu ma ọ bụ mkpebi ọ bụla n'ihu ndị mmadụ. Mgbe ahụ ndị mmadụ ga-enwe ọrụ ụbọchị maka mkpebi ahụ niile ma mechaa nwee mmasị. Agbanyeghị, ọ nwekwara ike ịpụta na a na-akwanyere ndị nduzi ùgwù ma ọ bụ na-ekpe ha ikpe maka ịdị mfe na nke na-emebi emebi kama nkwurịta okwu na-eji ajị anụ ahụ nke anyị jizi n'aka ha. Yabụ na ha ga-ebugara ọrụ dị mfe ma doo anya, yabụ na anyị chọrọ ụdị ndị ọkwọ ụgbọala dị iche iche.
Ihe dị njọ adịghị mma ga-eduga ngbanwe dị mma: ụkpụrụ na-amalite site n'ọtụtụ gaa na mma.
Uru ndị dị na ya bụ na anyị nwere ike itinye breeki na ịsacha na etiti wee gaa site na nhịahụ ruo nfe. Ihe ọzọ pro bụ na anyị na-enweta ezigbo ndị nnọchianya kama nke ndị mmadụ na-anọchite anya nnukwu ego na okpueze. Ndi nnochite anya ndi mmadu agha aghaghi ibu ihe okwu a putara.
Nke ahụ bụ otu ị si eme ya
Anyị na-amalite site n'ịjụ usoro iwu na-akwadoghị nke anyị nọ ugbu a. Ihe na - ezighi ezi putara na o megidere ikike ndi mmadu.
Iwu ahụ bụ okpueze bịanyere aka na ya, okpueze bịanyekwara aka na ya. Na nsogbu Corona, anyị ahụla na gọọmentị na-elegharakarị iwu anya ma na-echepụta iwu ọhụrụ ndị na-emebi iwu. Anyị kwesịrị ịlaghachi n'ụkpụrụ nke ikike dị mkpa karịa ụkpụrụ nke iwu. Site na ikike izizi ahụ, mmadụ niile nwere ikike nha anya. Ọ bụ ya mere ọchịchị onye kwuo uche ya ji bụrụ ihe ngwọta.
Nzọụkwụ 1 bụ usoro ochie ochie dabere na okpueze ma jụ ọdịdị nke onye kwuo uche ya. Nke ahụ pụtara iwere ọnọdụ na ikike anyị chere dị adị bụ nke iwu na-akwadoghị. Enweghị amara nke Chineke ma a ghaghi swornụọrọ mmadụ iyi.
Nke a pụtara na anyị nwere ike ịjụ ntaramahụhụ, njikwa na ntaramahụhụ na ọnọdụ:
Ọ dighi onye ọ bula nwere ike n'arum n'ihi na aru-ya bu ihe kpuchie isi ya. Okpueze a dabere na amara nke Chineke. Institlọ akwụkwọ niile dịka ụlọ ikpe, ndị isi ụtụ, nyocha, wdg, na-a swearụ iyi maka okpu eze. Ndị ọka ikpe niile, ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị, ndị agha, ndị uwe ojii na ndị ọzọ na-a swearụ iyi maka okpueze. Ha enweghị ikike n'ebe anyị nọ. "
Nzọụkwụ nke mbụ bụ ịjụ ikike ọ bụla, jụ iwu ntaramahụhụ na ntaramahụhụ yana ịjụ ụgwọ ụtụ isi. Anyị ga-ahapụ usoro ochie.
Ọ bụrụ n’ịbịakwute ụlọ ikpe, ị nwere ike ịgwa onye ọka ikpe na ọ alleụrụ iyi irubere isi (amara nke Chukwu), yabụ na-enweghị ikike ọ bụla. Can nwere ike na-atụ aka na iwu nke okpueze (amara nke Chineke) dọtara. Inwere onwe gị ịga.
Anyị na-ewu usoro ọhụrụ, site na ịnye arịrịọ nke ọtụtụ mmadụ nwere ike bịanyere aka na saịtị a. A na-ezigara arịrịọ ahụ na gọọmentị dị n'okpuru yana okpueze ma kwuo na ha ga-agba arụkwaghịm.
Anyị kwụsịrị ikiri TV, na-ege ntị na mgbasa ozi na ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị, anyị na-ahụkwa na mgbasa ozi na-elekọta mmadụ bụkwa ngwá ọrụ dị n'aka onye nnweta.
Anyị na-ajụ ike ọchịchị obodo, gọọmentị mba na Brussels wee bido na ọkọ.
Ndi ministri nwere ike nogide na ha choro ka ha biputa akuko gbasara ego ha. Ndi ndu nke uloru ndia gha swearuara ndi mmadu iyi ma bido ozugbo inyocha oru na iwu.
Ministri ego aghaghi igosi site na otu ihe dị na ite ụtụ ahụ na ụgwọ ole ndị butere.
A ga-ajụ ụgwọ ndị ahụ ma debe ya efu. Anyị gbanwere bitcoin ozugbo wee hapụ euro na dollar. Ike na mmetụta nke European Central Bank na ụlọ akụ ndị ọzọ ga-apụkwa apụ. Ha ebiputara ego na ebe ozo na usoro ego ego di odida.
"A ga-ajụrịrị ụgwọ nke mba ahụ ozugbo ma debe ya efu."
Enyere ndị ahụ ohere ịmeghee akaụntụ bitcoin maka izu 1 ma Ministri Ego na-etinye onye ọ bụla ego 1 bitcoin.
Bitcoin na-enye mkpuchi. Enweghi ego iji ego achoro, kama ego ohuru kpuchie, ebe bitcoin bu ihe "ola edo".
Onye ọ bụla na-enweta ezigbo ego. Nke a yiri usoro ọchịchị Kọmunist ugbu a, gọọmentị na-arụkwa ọrụ, mana n'ihi na ike nke ndị mmadụ na-agakwuru ndị mmadụ ma guzobe ọchịchị onye kwuo uche ya, belata ihe egwu nke ọchịchị aka ike.
Enyere ndị na-azụ ahịa na ụlọ ọrụ otu ọnwa iji wụnye sistemụ na-enye ohere ịkwụ ụgwọ bitcoin ma ozugbo nabata azụmahịa bitcoin ozugbo dị ka usoro ịkwụ ụgwọ.
Enyere ngalaba nke ime ọnwa 1 iji guzobe usoro ịtụ vootu na-akpọ blockchain, nke na-enye ndị mmadụ ohere inyefe ndị mmadụ iwu maka ịjụ ma ọ bụ nyochaa.
Enwere ike iji DigiD mee ntuli aka, mana ịgbakwunye digitization site na ihu ihu ma ọ bụ akwụkwọ ịgba ọgwụ mgbochi dijitalụ naanị ga-akwado.
Iwu niile dị adị anaghị adị irè ozugbo. Anyị ga-etinye usoro wepụta oge. Ndị na-eme ihe ngosi, ndị ikpe, ndị agha, ndị uwe ojii na ndị ikpe na-akwụsị ọrụ ha ozugbo.
Ministri nke ime obodo ga-ewetakwa usoro ịtụ vootu nke blockchain n'ime otu ọnwa, nke ndị mmadụ nwere ike ịhọpụta ndị nnọchi anya ha ozugbo.
A ga-enwe ndị nnọchi anya 1 hotara na ngalaba ozi ọ bụla, na ọtụtụ votu sitere na usoro ntuli aka blockchain nwere ike ịhọrọ onye nnọchi anya.
Ndi isi ohuru a gha ebido ozugbo ma kpoturu ndi mmadu kwa izu site na nkwurita okwu na YouTube ma obu ndi ozo na-ekwu okwu.
Ha na-eme nyocha ngwa ngwa maka iwu dị iche iche ma hụ na agwagbu na oke nke iwu dị ugbu a ma chịkọta ya na ọnụ ọgụgụ kacha elu nke iri ise na ọrụ.
A na-ewetara ndị ahụ iwu ọhụrụ ahụ dịka iwu 'ọha mmadụ' site na iwu na nchịkọta nke mkpụrụ 1000.
Ndị mmadụ nwere ike ịnakwere, jụ ma ọ bụ weghachite 'iwu obodo' ndị a site na usoro ntuli aka nke blockchain maka nyocha.
Thelọ ọrụ mgbasa ozi ga-akwụsịtụ mgbasa ozi na mmemme mkparịta ụka. A ga-enwerịrị oge ngụkọ mgbasa ozi ruo mgbe ndị nnọchite anya ndị ọhụrụ na-atụgharịrị usoro ahụ dum.
Ha ga-enyocharịrị usoro mgbasa ozi na akwụkwọ akụkọ niile, wee hụkwa na enyere ndị mmadụ ọrụ kama idozi usoro ochie.
* ihe odide ala ala peeji
Imechi iwu ịtụ ụtụ bụ nwa oge. Ọ bụ nkwusioru. Ebee ka iri puku kwuru ijeri mmadụ niile sitere na ndị niile kwesiri inyere ndị bi aka n'oge nsogbu Corona si? A naghị ebipụta ego ahụ ebe ọ bụla. Usoro ego niile dabere na ego ọkụ (ọ nweghị ihe ọ bụla kpuchitere ya na nke enweghị akwụkwọ).
N’ezie, ịkwụ ụgwọ ụtụ isi abụghị ikpeazụ. Ọ bụ nwa oge, rue mgbe ndị nnọchite anya ndị ọhụrụ (onye na-anọchite anya ndị ahụ n'ezie) ga-anọchi anya na ministri ma nwee ike ịsacha ma dezie usoro ahụ dum.
Ya mere, njedebe nke ụtụ isi agaghị abụ nke ikpeazụ, mana ekwesịrị ihichapu sistemụ ahụ site na ijeri ndị na-agbago EU na rue ECB.
Kedụ ka anyị ga-esi tinye ya n'ọrụ? Nke ahụ na-amalite site n'arịrịọ doro anya, nke ị nwere ike ịkọwa onwe gị na ịchọrọ ịbụ mgbanwe ahụ. Anyị nwere ike ikwu maka nsụhọ na iteta, mana naanị mgbanwe na - esite n'ọrụ. Guo isi okwu ndia site na mkpesa a ma tinye ntuli aka gi. Naanị anyị ga-eme mgbanwe, na ihe niile na-amalite site na mbọ anyị.
Anyị na-eji arịrịọ a:
Na okpueze enweghị ike
Na gọọmentị kwesịrị ịhapụ ọrụ ya ozugbo
Na iwu na ụkpụrụ niile anaghị adị irè ma gbanwee
Na a na-akwụsịtụ ndị mmanye ego ozugbo
A na-akwụsịtụ ụtụ ụtụ ahụ ozugbo
Iwu njo ahu abughi nke oma na akwusi ikwusi
Na ndị uwe ojii, ndị na-ekpe ikpe, ndị agha, ndị ikpe, ndị na-eme iwu, ndị na-enyocha ya na ndị ọrụ obodo niile ga-a swearụ iyi maka ndị mmadụ.
Na ụgwọ mba ahụ adabaghị
Na nkwupụta nke otuto nke ECB na ndi nbinye ego ndi ozo bu ihe adabaghi
Na a ga-enwe ọchịchị onye kwuo uche ya (dịka akọwara ebe a)
Arịrịọ a na arịrịọ anyị:
Ozugbo a kwụsịrị ọrụ nke eze, eze nwanyị, ndị otu ụlọ nke mbụ na nke abụọ yana ndị otu ụlọ ọrụ
Mmepe Direct - na nnyefe n'ime ọnwa 1 - nke usoro ntuli aka nke blockchain site n'aka ndị Minista Ego, nke enwere ike ịhọpụta ndị nnọchianya ọhụrụ (otu onye nnọchite anya na minista ọ bụla, ka ahọpụtakwa ma votu ya site na usoro ntuli aka blockchain)
Na Mịnịsta Na-ahụ Maka Ego Etinyela ego nke bitcoin n'ime Netherlands n'ime izu 1
Ikpe ikpe ọha na eze nke okpueze na ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị site na usoro ntuli aka blockchain, gụnyere okirikiri na ọdịnaya nke ikpe
Yabụ gaa na websaịtị ọhụrụ ugbu a, banye na arịrịọ na / ma ọ bụ sonye n'otu:
Ọgbakọ nta akụkọ Mark Rutte na Hugo de Jonge: ọha mmadụ na ọkara na ntinye nke ngwa ahụ
Ụlọ ụkọchukwu onye ọchịchị Rutte III anaghịzi adị
Vidio Dr. Plandemic Judy Mikovits bụ Eventdị Omume 201 nke ụdị akụkọ aghụghọ (video)
Na-akpọ mmadụ niile: nnupụisi! Ndị na-eme ihe ngosi: kwusi omume gị na-emebi iwu na-emebi iwu!
Tags: blockchain, nsogbu corona, okpueze, ochichi onye kwuo uche, kpọmkwem, agba, ozi, ndị ozi, arịrịọ, na ndọrọ ndọrọ ọchịchị, ndọrọ ndọrọ ọchịchị, ntuli aka, technology, gbanwee
A na m ahụ nke a ka ọ bụrụ echiche maka ịkọwasị ihe mgbaru ọsọ njedebe, ọ bụghị ihe etinyere ya ozugbo. Chaos kwere nkwa, oburu n’eme nke a. Kwụsị ụtụ? Ngwa ngwa ịhapụ otu nde ndị ọrụ obodo n’ọrụ, ọtụtụ ọrụ ọtụtụ narị puku mmadụ na-arụ ọrụ ga-abịarịrị kwụsịrị, nnukwu ụgbọ elu ga-ebido (ọ gwụla ma ụwa niile sonyere n'otu oge), wdg.
Ngbanwe nzo-ukwu nke ukwu n’etu n’enwe dika odi oganihu. Ga-ebu ụzọ kpochapụ ozi niile, dịka mgbasa ozi. Ọ bụrụ na ndị mmadụ ga-ekpebi ihe niile, ị kwesịrị ijide n'aka na ha ga-enweta ezigbo akụkọ banyere uru na ọghọm nke mkpebi ọ bụla. Ma m ji obi eziokwu na-atụ agwa mmadụ, nke na-emebi ụdị mgbanwe niile, nweekwa mmụọ nke ukwuu. Yabụ ị nwere ike dozie nke ọma na ọ bụrụ na, dịka ọmụmaatụ, aga-agha ụzọ ọhụụ, ma ha enwetara ụfọdụ mmadụ n'ihu igwefoto na-eme mkpesa na okporo ụzọ a dị nso n'ụlọ ha, ma ọ bụ site n'ọhịa, 90 n'ime 100 Ndi mmadu ga eme ntuli aka.
Yabụ na ọ ga-adị ọtụtụ ọrụ, echere m. M na-atụ ụjọ na mgbe ahụ ọtụtụ agaghị enweta n'ala ọzọ, ị ga - ejikwa sistemụ komunizim mara mma nke ga-adị nnọọ na Soviet Union, gbakwunyere na teknụzụ dị elu. Echeghị m na nke ahụ bụ ụwa ka mma ibi.
Echere m, dị ka gị, na usoro dị ugbu a nwere oge kachasị mma, yana nrụrụ aka, nepotism na ụdị ndị otu ọ bụla enyerela ha oke ike. Royal Royal nọ n'ọnọdụ ọ bụla bụ ebe oge ochie kara aka (ọ bụ ezie na wmb ahụ ka nwere ike ịnwe dị ka 'ụdị ozi' nke Netherlands - Nkwalite ma ọ bụ -Folklore ma ọ bụ ihe, ma napụrụ ikike niile). Yabụ ọ ga - adị iche, mana gbasaa nke ahụ n'ihe dị ka afọ 10 ma ọ bụ karịa, nke m chere na ọ dị oke ọsọ, nyere nnukwu ọgba aghara nke kwesịrị ime. Mmadu, ndi mmadu gha aghaghi imetuta uche ya aka.
Ido nke doro anya: Iwu ụtụ isi bụ nwa oge.
Ebee ka iri puku kwuru ijeri mmadụ niile sitere na ndị niile kwesiri inyere ndị bi aka n'oge nsogbu Corona si?
A naghị ebipụta ego ahụ ebe ọ bụla. Usoro ego niile dabere na ego ọkụ (ọ bụghị ihe ọ bụla nkịtị na ebipụtara).
N’ezie, ịkwụ ụgwọ ụtụ isi abụghị ikpeazụ. Ọ bụ ya mere o kwukwara na 'kwụsịtụrụ'. Ọ bụ nwa oge, rue mgbe ndị nnọchite anya ndị ọhụrụ (onye na-anọchite anya ndị ahụ n'ezie) ga-anọchi anya na ministri ma nwee ike ịsacha ma dezie usoro ahụ dum.
N'ihi ya, njedebe nke ịkwụ ụtụ isi agaghị abụ nke ikpeazụ, kama ọ ga-asachapụ n'ọtụtụ ijeri mmiri gafere na EU na rue ECB.
Chee echiche ọzọ.
Ezigbo nkowa gbasara ego fiat (ịkọ obere ọchị)
Ma nke a ka di
Na ikwu eziokwu, ekwetaghị m na ngbanwe nzọụkwụ site na ihe niile nwere ike ịdị njọ ma ọ ga - eme ya ọsọsọ. Otu ihe di nkpa na nke a bu na aghaghi aghaghari site n’elu ruo na elu. Ndi mmadu aghaghi ikwu okwu ma aghaghachite sisitemu ike. Ime ngwa ngwa bu isi.
Martin, ọ bụrụ na m ghọta n’ụzọ ziri ezi, ị kọwara otu ihe dị na ya nke na-eme ka a kwụsị iwu dị ugbu a "N'aha ndị mmadụ". Ya mere nke a pụtara njedebe nke usoro ochichi iwu obodo, nke ndị otu ndị omeiwu na-anọchite anya "ọchịchị onye kwuo uche ya" na-anọchi anya ya. Ya mere, onye Republic…
Ọ dị mma na m na-echebu na ọ bụ usoro ihe ijuanya juputara na imegiderịta N'oge ọmụmụ ọmụmụ Social na Gymnasium, ndị nkuzi ga-aza ajụjụ a dị mfe "Olee otu a ga-esi nwee ọchịchị onye kwuo uche ya ma ọ bụrụ na ndị ọrụ gọọmentị swearụọ iyi maka ikpu okpueze ahụ?" Ebe m nwere ike wee lelee paseeji ahụ .. obere ihe agbanweela na nsọpụrụ ahụ.
Companieslọ ọrụ ndị ahụ ga-ekerekwa na ụdị mgbanwe a ma tumadi na ngalaba ego. N'ebe a kwa anyị nwere ike ịlaghachi na sistemụ ebe ndị nkwụnye ego na ndị na-etinye iwu na-aghọ ndị nwe ha. Enwere ike ịme ntuli aka na ntinye ego, amụma ụgwọ ọnwa na ihe ndị ọzọ dị mkpa site na blockchain. Mgbe nke ahụ gasiri, enwere ike ịgbanwe ngalaba ndi ozo. Otu nsogbu nke ugbu a bụ eziokwu bụ na ọtụtụ ndị buru ibu na-ekpebi iwu gọọmentị. Echere m na nke a kwesịrị idozi nke a na nzọụkwụ 1.
Ngwọta gị bụ ezigbo mma na teknụzụ ndị dị ugbu a. Ma ana m eche nke ukwuu ma oge teknụzụ a ga-adị ogologo. Anyị ahụworị ihe mbụ bu ụzọ hụ. Eluigwe na ụwa ga - ahụ na edoziri ihe niile. Ndị satọnites Elon ga-akwụsị ọrụ, ịntanetị ga-agbadata, ndị mmadụ ga-alaghachi azụ. Egoism agaghị adị ndụ n'ike.
Anyị abịarutela oge anyị maara ọnọdụ ahụ. Anyị na-ata ndị ọzọ ụta ma anyị na-akwụ ụgwọ maka ya onwe anyị. Anyị niile nwere sistemu arụmọrụ Microsoft na kọmputa anyị. Anyị niile na-atụ ụtụ isi maka ego Willy, Rutte na agha.
Anyi aghaghi ikwuputa mmebi iwu ma weputa uzo ohuru dika gi otu anyi nwere ike isi weghachite ihe anyi onwe anyi.
I kwuru eziokwu, ọ dị anyị n'aka. Ihe mere anyị ji dịrị ndụ bụ ka anyị na-arụ ọrụ onwe anyị. Nwee obi uto na ekele na onwe gi na nkpuru obi gi ma kwe ka nkpuru obi gi kpuo onwe gi.
O buru na inyochaghi onwe gi, onye ozo gha eme ya.
enwere ọtụtụ ihe atụ ebe akụ na-eme atụmatụ maka ugbua na ahọrọlarị maka mgbanwe aha analog na mgbakwunye ma ọ bụ dịka nnọchi maka ụdị dijitalụ ahụ.
Agaghị enyere m aka ikwere
ma olee ndị anyị ga-akpọrọ.
Ha anaghị aga ofu obi na mpempe akwụkwọ A4 juru ebe niile.
Okpukpo nke ndi Crown gha aghaghi ibu agha, ima, ee
ma ọ bụghị naanị mgbanwe
Ihe na-adọrọ mmasị bụ na ndị mmadụ ga-achọ mgbanwe, mana ha ekwenyeghị na anyị kwesịrị ịbụ ngagharị iwe anyị.
Can nwere ike ịkwado nke a site na ịmalite usoro usoro onye kwuo uche ya. Nke ahụ pụtara na ị ga-emerịrị onwe gị.
Anyị na-eme mkpesa ma kwuo na ha anaghị eme ihe ọ bụla na The Hague. Anyị na-eme mkpesa na okwu ndị dị ka: "Olee ebe ndị mmegide ahụ?!"
Naanị ezigbo mgbanwe nwere ike ịbịa n'ezie site na ị mee ka onwe gị rụọ ọrụ. Nke ahụ ga - abụrịrị ọtụtụ ihe.
Anyị chọrọ ịgụ ihe dị njọ banyere mkpọchi mkpọchi, ihe ojoo gbasara ịgba ọgwụ mgbochi yana ihe ọjọọ gbasara Bill Gates, mana ịgbalite onwe gị bụ mberede nzọụkwụ.
Ọ dị mkpa ịghọta ụkpụrụ nke ego echekwara. Havenweghi nchekwa echekwara na ebiputara na enweghị ego (dika ọ dị n’oge nsogbu) ma si otu a na - ebute hyper inflation (nke a na - akpọkwa ‘fiat money’) ma ọ bụ na ịnwere ego ejikọtara na ọkọlọtọ, dịka ọla edo ma ọ bụ mmanụ. Oilkpụrụ mmanụ OPEC adaala kemgbe, ebe ọnụahịa mmanụ abaghị uru. E wepụtara ọkọlọtọ ọla edo ọtụtụ afọ gara aga. O yiri ka Bitcoin ọ bụ ọkọlọtọ ọhụrụ.
Ọzọkwa enwere ihe egwu nke digitization, na-ejikọ na AI, mana na usoro nke yiri ka ọ gaghị ekwe omume ịkwụsị, ị nwere ike ịgbanwe pyramid ike.
Nke a bụ nkọwa nke otu ụdị "ụkpụrụ ọla edo" dị otú a si arụ ọrụ:
"Fiat ego" ma ọ bụ "ego nke ego" bụ ego nke anaghị enweta uru ya site na ihe eji eme ya (ọnụ ahịa dị ka mkpụrụ ego ọla edo na ọla ọcha), mana site na ntụkwasị obi na enwere ike iji ya zụta ngwongwo na ọrụ. Ya mere onyinye ebughi oke sitere na otu olu na udiri igwe ihe di nkpa, kama na ntukwasi obi na ndi n’enye ego na etinye ego nke ego.
N'oge a nke nsogbu Corona, ego fiat na-ebelata ngwa ngwa. Nke ahụ bụ ọnọdụ a na-apụghị ịgbagha agbagha.
Enwere mmekọrịta dị n'etiti ego na ike. Enweghị ndị agha US na ikike ikpebi agha, dollar agaghị aba uru dị ukwuu. Na n'ezie njikere nke ndị agha America, ndị agha, iji nọgide na-enwe nnọkọ America maka dollar.
Lee anya n’ala ala aka nri ka erere ọla edo, ọla ọcha na crypto (na mpempe akwụkwọ). Nke a pụtara na, dịka ọmụmaatụ, mmadụ 173 na-ekwu na 1 oz nke ọla ọcha, 172 zụta ikuku. Ọdịmma ziri ezi nke ọla ọcha na US bụ $ 2615, uru ziri ezi nke dollar bụ 👻
Bass Ruigrok dere, sị:
Ihe kpatara WW2,
National Socialism mepụtara usoro ego efu na-akwụsị ụgwọ ọha na nke gbochiri ndị na-eburu ego…
N'ihi ya, a ga-ewepụta ihe ọjọọ banyere National Socialist Germany.
Cheedị ụdị iwe ga-adị mgbe ndị mmadụ matara na ndị ahụ a sị na ọ bụ ndị mbibi ebibiwo usoro kacha mma.
N'elu elu na n'okpuru, ihe ọma dị njọ, onye omekome na-eme ihe.
Otu ihe ahụ Ghadaffi na Saddam Hussein nwara ime…
Ajụjụ a bụ, nke kachasị, ka ị ga - esi nweta ndị uwe ojii na ndị agha. Should ga-enweta nke a. Aghọtaghị m ihe mere ị ga-eji gbuo mmadụ dị ka onye agha. N'agha ị na-amataghị ihe kpatara agha ahụ. Na iwu nke na n'okpuru ụgha asị nke.
Enwere m ike ikwenye ndị uwe ojii, mana ọ bụrụgodị na ndị isi gị agwa gị ka ị kwụsị ịme ngosi. Mu na obodo obula.
Ọzọkwa, ihe m chere, ị kpughere kwa. Jensen dị nnọọ freemason. Otu 1 n’ime ha, ana m ele ya anya n ’ọ whileụ mgbe m na-eri nri. Ma nwoke ahụ n'ezie agbanweghị n'akụkọ ya. Naanị nwee mmetụta na - enweghị mmetụta maka Trump.
Mgbe ahụ, akụkọ banyere nodị Aha ahụ anaghịzikwa aha ya na mmeghachi omume ndị mmadụ. Na ị ga-ede Jansen ma ọ bụ Jensen ebe ahụ, ọ dị afọ iri atọ na atọ. Emechaala nke ahụ, yana kwa nzuzu. Ekwuru na GS na-egbochi Jensen. Mana nye Jensen 33 dịka ọmụmaatụ. Ọ na-ewerekwa ọtụtụ ndị ohu ya n'ọnyà. Ọzọkwa vidiyo nke ehichapụ nwere ihe dịka 33, gụọ nọmba Masonic 180.000. Ihe mmegharị aka ndị a niile abụghị n'efu. Nwatakiri egwu dika Etc wdg. Sharp na anya n’iru gi.
ha puru itinye amara nke Chineke n’ebe anaghi anwu. Ọ na-abụ ụlọ ihe nkiri maka oke amaghị ..
Dịka Queen kwụsịrị nzuko omebe iwu Britain na August nke 2019, nke ndị mgbasa ozi rere ka Boris Johson na-arịọ ikike n'aka eze nwanyị. Ka osi di, na iwu ochichi Britain, eze nwere ikike (ikike) inye ikike mgbe ndi otu nzuzo dụrụ ya ọdụ.
D nweta usoro iwu "ndị iwu na-achịkarị" nke ndị ejigoro (nnefuckers), eze nwanyị nọ karịa iwu na ikike naanị ọchịchị Commonwealth (Canada, Australia, NZ wdg). Dịka Madurodam ka bụụrụ eze ọchịchị yana ụlọ ihe nkiri (nke na-ekwu okwu ukwu).
Ihe nkiri mara mma na ihe na-atọ m ụtọ. Onye di egwu nke na-ekwuputa ihe niile dị na weebụsaịtị a kemgbe afọ. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ n'ụzọ nkịtị, n'ihi na ọ na-akpọ ọzọ maka "ike dị elu" ịgbanwe.
Nwanyị nwanyị a nwere ike inwe ebumnuche kachasị mma, mana ọ dị mwute ikwu na mmụọ okwu ya agaghị agbanwe ihe ọ bụla na ụlọ akwụkwọ ebe o kwuru okwu a.
Dị ka Martin si kọwaa, ezigbo mgbanwe na-esite n’etiti. Ọ bụrụ na okwu nwanyị a na-esite n'aka onwe ya n'ezie, ọ ga-adị mma maka ịbụ onye ụkochukwu n'isi usoro ọhụrụ akọwara n'elu 🙂
" Vidio Dr. Plandemic Judy Mikovits bụ Eventdị Omume 201 nke ụdị akụkọ aghụghọ (video)
Nnukwu oke ego n'oge nsogbu corona na-eduga ịba ụba: ọ bụ bitcoin ga-agwọta? »
Nleta ha: 2.482.054
Amalek op iPhone na-ezochi ngwa covid-19 kachasị ọhụrụ nwelite i-OS 13.5
SalmonInClick op Mmadu ole ndi Dutch ka nwere ike ikwu ugwo ha n'oge nsogbu Corona?
ClairVoyance op Kedu ihe kpatara ọtụtụ ndị gbara gị gburugburu ji kpuo ìsì?
Mmiri op Ike nke mgbanwe na-amalite site na mkpo nke egwu, mmemme na echiche ụgha ma tụgharịa bụrụ ezigbo mgbanwe